Ihe ntanetị: Ntinye Ntanetị Ntanye na Mgbakwunye
Maka ndị mbido, usoro ntanetị weebụ na-elekwasị anya na nbudata nke data na-adịghị edozi na nke a na-edebere na ibe weebụ na saịtị na data echeziri echekwara na spreadsheets na ọdụ data Excel. N'oge a, nchapu bụ ọrụ-eme-onwe gị, ọ bụ Google. Na ntanetị weebụ, nchịkọta weebụ bụ naanị pịa.
Data a na-emeghi ka ọ dị na HTML. Iji weghachite data site na saịtị na ụdị dị iche iche, ị ga-eme ụfọdụ nchịkọta. Ọ bụrụ na nzuzo adịghị mmasị gị, a na-emepụta ntanetị weebụ iji weghachite maka nchịkọta data weebụ gị.
Nkọwa ọnụahịa ọnụahịa
Mgbasa ozi ntanetị ntanetịpụta ozi bara uru sitere na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị ka foto, ọnụ ahịa ngwaahịa, na nkọwa. A na-eji ndị ahịa e-azụmahịa nwe ihe ọmụma maka ntanetị ego na nyocha data. A na-ejikwa ụlọ ọrụ na-agagharị agagharị na-eji nlezianya eme ihe. Site na ntanetị weebụ, ị nwere ike wepụ ihe oyiyi na ngwaahịa ahịa site n'ọtụtụ saịtị ma debe data na datasheets maka nyocha data.
Ijikwa nyochaa Online
N'uwa ụwa nke ịzụ ahịa n'Ịntanet, ịnọgide na-enwe ọnọdụ ntanetị dị mkpa dị ka nlọgharịa azụmaahịa ịzụ ahịa gị, nke a bụ ebe ọtụtụ e-azụmahịa na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na ị nyochaa weebụ, ị nwere ike wepụ data bara uru na nsogbu ndị na-ewu ewu, echiche ndị ahịa, na eziokwu nke ndị mmadụ.
Site na ụdị data a na akwụkwọ mpịakọta Excel gị, ị nwere ike ikpebi ebe ị ga-enwe mmetụta n'ịba ụba
Ịchọpụta Ntanetị Ntanetị na Nyocha Spam
Ntanetị saịtị na-agbanwe n'otu ntabi anya. Ya mere ọ dị oké mkpa ịhụ ọkwa mgbanwe nchịkọta oge na ime usoro dị irè maka Ị nweta data nchịkọta, nke a bụ ebe ntanetị weebụ na-abata. Site nchịkọta nchọgharị a, ị nwere ike ịchọpụta ntanetị weebụ na nyocha nke aghụghọ nke na-achọ iduhie ndị ọrụ gị.
Gịnị mere Web Wepụ?
Web Scraper bụ bro top top wser plugin nke na-enye ọrụ ntinye data na nchịkọta Google Chrome maka n'efu. A na-ebudata data sitere na Web Scraper na nbudata faịlụ CSV ma mechara chekwaa na CouchDB. A na-eme ihe nchọgharị weebụ dị ka ntinye data, mbupu, na ụlọma na saịtị na Chrome.
Gini bu ihe ntinye ihe ntanetiti?
Weebụ Web bụ ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị nyere n'efu na ụlọ ahịa weebụ Google. Site na ndọtị a, ị nwere ike wepụ data bara uru site na ibe weebụ. Enwere ike ịchekwa data site na iji mgbatị weebụ dị ka faịlụ CSV ma ọ bụ na CouchDB. Mgbatị a na-arụ ọrụ na saịtị ma ọ bụ na-aga. Dịka onye ọrụ, ị ga-ekpebi ihe ị ga-ewepụ na ihe ị ga-ahapụ.
Iji wụnye Weebụ Web, gaa na ụlọ ahịa weebụ Google ma tinye mgbakwunye na Chrome. Mee ka nchịkọta weebụ wepụ ihe maka gị. Ngwaọrụ a na - achọgharị ma na - ewepụta data dịka nhazi nke saịtị site n'aka onye njedebe ikpeazụ Source .